Loka Bernard Ramanantsoa : orinasa 11 no mendrika | NewsMada
Loka Bernard Ramanantsoa : orinasa 11 no mendrika
Nozaraina, ny asabotsy 30 oktobra teo teny amin’ny lapan’Ambohitsorohitra, ny loka ho an’ireo orinasa mendrika nandritra ny fifaninanana “Amboara HEC Paris Bernard Ramanantsoa”. Mahatratra 11 ireo nomena loka, arakaraka ny sokajy nifaninanan’ny orinasa tsirairay avy. Hahazo fiofanana avy amin’ny masoivohon’i Frantsa ireo mendrika, atao ao amin’ny Inscam Antananarivo sy any amin’ny HEC Paris. Misy sasany amin’izy ireo koa mahazo lelavola 2,5 tapitrisa Ar.
Voalohany amin’ny mpampiasa (manana mpiasa 11-100) ny orinasa Delta Audit; mendrika ho an’ny manana mpiasa mihoatra ny 100 ny Smartelia. Tsara fikarakarana ny mpanjifa indrindra (manana mpiasa latsaky ny 10) ny CFRH-Institut, mihoatra ny 11-100, ny Solidis S.A; mihoatra ny 100 ny G4S.
Mahavita manao tolotra ho an’ny orinasa hafa (sous-traitant) ny Coreau, manana ny toerany eo amin’ny tsena, ny Ymagoo, torak’izany koa ny RDJ (mampiasa olona 11-100) ary mihoatra ny 100 ny Socolait. Mpitantana orinasa mendrika 2017 ny Acem ary orinasa 2017 ny Socolait.